/ဘ‌‌လော့ခ်/ပြတိုက်/DECA အမှုန့်-Ultimate လမ်းညွှန် Nandrolone Decanoate (Durabolin) Make လုပ်နည်း
အပေါ် Posted 05 / 30 / 2019 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်.
ဘာဖြစ်သလဲ Nandrolone Decanoate(DECA)
ယနေ့အများအပြားကာယဗလသူတို့ရဲ့ကြွက်သားထုထည်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့လေလံအတွက် Homebrew steroids မှကြိုက်တတ်တဲ့။ Nandrolone Decanoateအဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်အမည်ဖြင့် DECA-Durabolin အောက်တွင်ရောင်းချခဲ့ DECA, အဖြစ်လူသိများ, ညာ homebrewed လာသောအခါစိတ်ကူးရလဒ်များကိုပေးသောအစွမ်းထက် steroids တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်စက်မှုလုပ်ငန်းအသစ်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သင်သည်အဘယ်အရာကို Deca Durabolin ဖြစ်ပါတယ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကသင်တို့အဘို့အလိုလုပျနိုငျအံ့သြစေခြင်းငှါ။ ဤတွင်အခြားသူများထံမှဆိတ်ကွယ်ရာကသတ်မှတ်ထားသော Nandrolone Decanoate (DECA) features တွေတချို့ရှိနေပါတယ်။
Nandrolone Decanoate (DECA) နှေးသရုပ်ဆောင် Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်, ဤပိုလူကြိုက်များစေသည်။ တစ်ဦးနှေးကွေး Steroid တစ်မျိုးကိုသုံးပြီး၏အကျိုးကျေးဇူးကဘာလဲ? ဝက်ဘဝကြာကြာ, ကြာကြာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်စွန့်ခွာရန်အ Steroid တစ်မျိုးအဘို့ကိုယူပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်ဒီ Nandrolone Decanoate သောက်သုံးသောမကြာခဏဖြစ်ဖို့ရှိသည်ပါဘူးဆိုလိုသည်။ သင်သာသင်ထိုးအပတ်စဉ်အရနျလိုအပျစခွေငျးငှါအခြားသူတွေနဲ့မတူဘဲ, သုံးပတ်အကြာတွင်တစ်ဦးဆေးထိုးရရန်ရှိသည်။
Nandrolone Decanoate (DECA) (360-70-3) လည်းသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုကောင်းစောင့်ရှောက်မှုယူပြီးချစ်သောသူတို့သည်တစ်ဦး Darling အောင်အနည်းငယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ကမရှိသလောက်အီစထိုဂျင်မှပြောင်းပေးကြောင့်လျော့နည်းပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ်။
effects များ ကာယဗလအတွက် Nandrolone Decanoate
အစဉ်အဆက်အားကစားခန်းမသို့တက်ရောက်နှင့်သင့်ပြီးခဲ့သည့်အလုပ်ထွက်ကတည်းကပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကြောင့်မည်သည့်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုဆောင်ရွက်ရန်နိုင်ဘူး? Nandrolone Decanoate ၏အသုံးပြုမှုပြီးနောက်, သင်အတိတ်လေ့ကျင့်ခန်းကနေ recover နှင့်ပင်ပိုကောင်းလာမယ့်အချိန်လုပ်ဆောင်နိုင်နိုငျကွောငျးသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်သူတို့ကနျြးမာရေးကောငျးအတွက်အမြဲဖြစ်ကြောင်းသေချာကတည်းက Nandrolone Decanoate ၏အသုံးပြုမှုနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမကပိုပူးတွဲနာကျင်မှု။
လုံလောကျအစှမျးသတ်တိမရှိရငျ, သင့်ကာယဗလရည်မှန်းချက်များအခညျြးနှီးဖြစ်ထွက်လှည့်စေနိုင်သည်။ သငျသညျအစှမျးသတ်တိရတယ်လျှင်အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်ပိုမိုကြွက်သားရရှိမှုဤအရပ်မှကြီးမားသောအလေးရုတ်သိမ်းပေးရန်နိုင်ပါတယ်။ Nandrolone Decanoate အမှုန့် သင်၏အစွမ်းသတ္တိကိုသင်အထွတ်အထိပ်အစှမျးသတ်တိမှာအလေး hit ခွင့်တိုးပွားစေပါသည်။
Nandrolone Decanoate ထူးခြားတဲ့ကြွက်သားအဆောက်အဦစွမ်းရည်ရှိပါတယ်, နှင့်ကောင်းသောအရာကသာအပေါ်ဖြည့်စွက်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ ပိန်ကြွက်သား အစုလိုက်အပြုံလိုက်။
သင်သည်သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းထူးချွန်အောင်လိုအပ်ပါသလား? Nandrolone Decanoate ၏အသုံးပြုမှုကိုသင်တိုဆုံးအချိန်အတွင်းမှာအဘို့အစွဲလမ်းခဲ့ကြသောကောင်အောင်မြင်ရန်အောင်, သင့်အားကစားရုံအစည်းအဝေးများပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းအောင်ကူညီပါလိမ့်မယ်။
Nandrolone Decanoate (DECA) Make လုပ်နည်း
1 Step: တစ် beaker သို့ Nandrolone Decanoate အမှုန့်စဉ်းစားပါ။
2 အဆင့်: အ BA ဘွဲ့များနှင့် BB ထည့်ပါ။
3 Step: အဆိုပါအရည်အတွက်အမှုန့်ထဲတွင်ပျော်ဝင်မှစတင်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ရန်ညင်ညင်သာသာအရောအနှောမွှေပေးပါ။
4 Step: ဖြေရှင်းချက်မှနှမ်းကိုဆီထပ်ထည့်ပါနဲ့နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ကမွှေပေးပါ။
5 အဆင့်: အပြွတ် filter ကိုသို့အပ် filter များနှင့်ပူးတွဲအသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်သောပြွတ်သို့နွေးဖြေရှင်းချက်ကိုတက်ဆွဲပါ။
6 Step: ကွန်တိန်နာဦးထုပ်
50mg / ml မှာ DECA 200ml များအတွက် Nandrolone Decanoate ကြော်အသီးအသီး
10grams Nandrolone Decanoate အမှုန့်
32.50ml နှမ်းရေနံ (ထူအဆီများနှင့်ကိုသင်မတည့်ဖြစ်စေခြင်းငှါသူတို့အရှောင်ကြဉ်ပါ) ။
2.5 Benzyl အရက် 5% (သင်ဆောင်ရွက်ရန်မဆိုစကားဝိုင်းအတွက် 5% BA ဘွဲ့ကျော်လွန်ဘယ်တော့မှမ)
.22 မိုက်ခရွန်ပြွတ် filter များ
Nandrolone Decanoate စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်ကိုမည်သို့အပေါ်ခြေလှမ်းလမ်းညွှန်ချက်အားဖြင့်အဆင့်
အဆင့် 1: တစ်ဦး beaker သို့ Nandrolone Decanoate အမှုန့်အလေးချိန်။
သင်၏အမှုန့်ကိုတိုင်းတာသည့်အခါစက္ကူ၏အလေးချိန်ပါဝင်သည်ရပါဘူးနိုင်အောင်, စာရွက်တစ်ရွက်ကိုယူပြီးအတိုင်းအတာပေါ်မှာအားမရခြင်းနှင့်တောမြိုးစေ့ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏စံပြအမှုန့်အလေးချိန်အတိုင်းထက်အလွန်ပြီးနောက် scooping စောင့်ရှောက်ရန်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အမှုန့်နည်းနည်းနည်းနည်းအားဖြင့်ထည့်ပါ။ သငျသညျတိကျမှုဖြစ်ကြောင်းသေချာဖို့, gram ပါရန်လုံလောက်သောတိကျမှန်ကန်သောစကေးရ။ သငျသညျဆယ်ဂရမ်ရပြီးတာနဲ့အခုသင်သွားကြဖို့ကောင်းပါတယ်။
အဆင့် 2: အဆိုပါ BA ဘွဲ့များနှင့် BB ထည့်ပါ။
အဆင့် 3: အဆိုပါအရည်အတွက်အမှုန့်ထဲတွင်ပျော်ဝင်မှစတင်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ရန်ညင်ညင်သာသာအရောအနှောမွှေပေးပါ။
သင်ကပင်မြန်ဆန်စေမယ့်ရေရေချိုးသုံးပြီးဖြေရှင်းချက်နွေးဖို့ရွေးချယ်နိုင်ဘူး။ သင်မည်သို့ပြုကြသနည်း အချို့သောရေနှင့်အတူအိုးတလုံးကို ယူ. အပူမှထိုသို့မီးဖိုပေါ်မှာထားပါ။ ဖြေရှင်းချက်များ beaker Get နှင့်ရေထဲသို့အနည်းငယ်စင်တီမီတာထားပါ။ သင်တို့သည်လည်းတစ်ဦးရေနွေးအိုးထဲကနေပူနွေးသောရေကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်ဤအရပ်မှဓာတ်တိုးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရမ်းပူပြင်းတဲ့ရေကိုရှောင်ပါ။
အဆင့် 4: ဖြေရှင်းချက်မှနှမ်းကိုဆီထပ်ထည့်ပါနဲ့နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ကမွှေပေးပါ။
အဆိုပါနှမ်းရေနံဖြေရှင်းနည်းမှန်ကန်စွာစီးဆင်းခွင့်ပြုပါရန်ဖြေရှင်းချက်၏ကဲ့သို့တူညီသောအပူချိန်ရှိသင့်ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်နှင့်မျှမဆိုအဆိုပါ filtration ဖြစ်စဉ်ကိုပြောင်းရွှေ့မတိုင်မီရှိကွောငျးသေချာပါပြီစေခြင်းငှါမဆိုဟော်မုန်းလောကဓာတ်အဘို့အစစ်ဆေးပါ။
အဆင့် 5: အဆိုပါနွေးဖြေရှင်းချက်ကိုတက်ဆွဲပါ အဆိုပါပြွတ် filter ကိုသို့အပ် filter များနှင့်ပူးတွဲအသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်သောပြွတ်သို့။
သငျသညျထိုလုပ်ငန်းစဉ်နှေးကွေးလာပြီကြောင်းသတိပြုမိသည့်အခါအဖြေသစ်တစ်ခုအတူ filter ကိုစီးဆင်းနှင့်အစားထိုးခွင့်ပြုပါရန်ပြွတ်အပေါ်အချို့သောဖိအားကိုသုံးပါ။
အဆင့် 6: ကွန်တိန်နာဦးထုပ်
သင် filtration လုပ်ငန်းစဉ်ပြုမိကြသည်နှင့်တပြိုင်နက်, ဖြေရှင်းချက်ယခုအသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့ကွန်တိန်နာဦးထုပ်။
ကစတီရွိုက်ကိုယူပြီးမှကြွလာသည့်အခါကလူနှစ်မျိုးရှိပါသည်; ရောင်းရန် Nandrolone Decanoate မဝယ်သောသူတို့နှင့်ကုန်ကြမ်း Nandrolone Decanoate ကနေစပြိုးနပွေီအိမ်ပြန်ပိုနှစ်သက်သောသူတို့။ နှစ်ဦးစလုံးသုံးပြီးများတွင်တစ်ဦးတည်းသာရည်မှန်းချက်သည်ရှိ၏, ပိုကောင်းတဲ့-ရှာဖွေနေခန္ဓာကိုယ်ဖန်တီးရန်။
အမှု၌သင်တို့ပြီးနောက်သင်ကအနည်းဆုံးကနည်းမှန်လမ်းမှန်ပြုပါရန်ကြိုးစားသင့်ကြောင်း Steroid တစ်မျိုးကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြိုးနပွေီအိမ်ပြန်ပိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။ အဆိုပါ Nandrolone Decanoate စာရွက်ပေါ်တွင်ပေးသောအောက်ပါ by Deca အောင်ဘယ်လိုသငျသညျစုံလင်သောရလာဒ်များအများဆုံးဖွယ်ရှိလိမ့်မယ်။ အဆိုပါအရည်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုကိုတစ်လျော့နည်းပမာဏကိုကျော်လွန်သို့မဟုတ်သုံးပြီး Nandrolone Decanoate အမှုန့် သင့်ရဲ့ Steroid တစ်မျိုး၏အရည်အသွေးကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။
အမှန်တရားအတွက်, လက်ျာယန္တရားနှင့်ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ, သငျသညျအငြိမ့် Homebrew Nandrolone Decanoate နိုင်နှင့်သင့်ကာယဗလအလားအလာနားလည်သဘောပေါက်။
Nandrolone Decanoate, GJ Blokdijk, CreateSpace လွတ်လပ်သောထုတ်ဝေရေးပလက်ဖောင်း, 2018, စာမျက်နှာ 1-170
ဟို Steroid တစ်မျိုးနှင့် Athlete- 2d ဝီလျံ N. တေလာ ed ။ MD, စာမျက်နှာ 39
ယောဟနျသအေသောမတ်စ်တည်းဖြတ်မူးယစ်ဆေးဝါး, အားကစားသမားများနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်, စာမျက်နှာ 27-30
9670 Views စာ
Trenbolone Enanthate Powder 2019 ရောထွေးဖို့ Trenbololone ကြော်အသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို အဆိုပါ 10 လူကြိုက်အများဆုံးဟို steroids Raws ပစ္စည်း